Milaza ny Britanika fa zava-dehibe ny tontolo iainana sy ny faharetana rehefa misafidy dia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Milaza ny Britanika fa zava-dehibe ny tontolo iainana sy ny faharetana rehefa misafidy dia
COP 26, izay atao miaraka amin'ny WTM London, dia hitondra ny faharetana ho eo an-tampon'ny fandaharam-baovao, ary ny indostrian'ny fitsangatsanganana dia mila manova izany fahalianana izany ho hetsika.
Maherin'ny telo amin'ny efatra mpandeha UK no milaza fa ny tontolo iainana sy ny faharetana dia singa manan-danja amin'ny fisafidianana dia, hoy ny fikarohana navoaka androany (Alatsinainy 1 Novambra) nataon'ny WTM London.
Ny tatitra momba ny indostrian'ny WTM dia nahatsikaritra fa ny 78% amin'ny santionany 1000 mahery dia nanisy lanjany ny tontolo iainana sy ny faharetana. Manodidina ny iray amin'ny dimy (18%) no nilaza fa tena zava-dehibe izany ary ny iray amin'ny efatra (23%) no nisafidy ny tena zava-dehibe.
Saingy ny valinteny mahazatra indrindra amin'ny fanontaniana dia nahita mihoatra ny iray amin'ny telo (38%) Brits mamaritra ireo olana ireo ho "somary manan-danja".
Etsy ankilany, mbola misy mpitsangatsangana britanika mafy orina tsy resy lahatra, miaraka amin'ny 16% manaisotra ny faharetana ho tsy dia zava-dehibe ary ny 7% milaza fa tsy misy.
Ny valin'ny fanontaniana hafa ao amin'ny tatitra dia manambara ihany koa fa ny ankamaroan'ny Brits dia manandrana mandeha am-pahamendrehana saingy mbola misy vitsy an'isa mandà ny fitondran-tena antonony mifanaraka amin'izany.
Nalaza tamin'ireo santionany ireo hetsika sy fihetsika toy ny fampiasana lamba famaohana, fanodinana, ary fiezahana hividy vokatra sy serivisy eo an-toerana. Tsy nisalasala anefa ny 15% tamin’ny valin-tenin’izy ireo, izany hoe tsy miraharaha ny tontolo iainana mihitsy izy ireo rehefa mandeha.
Simon Press, Talen'ny Fampirantiana, WTM London, dia nilaza hoe: "Ny indostrian'ny fitsangatsanganana dia manana fomba iray handresena lahatra ny mpanjifa rehetra fa ilaina ny manomboka mieritreritra bebe kokoa momba ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana sy maharitra amin'ny diantsika.
"COP 26, miaraka amin'ny WTM London, dia hitondra ny faharetana ho eo an-tampon'ny fandaharam-baovao, ary ny indostrian'ny fitsangatsanganana dia mila manova izany fahalianana izany ho hetsika. Azo antoka fa fanoloran-tena handray anjara amin'ny fampihenana ny fiovaovan'ny toetr'andro ny indostria.”